Chenjerera Kuti Uwanezve, Mutsva Mutsva We Botnet - Semalt Expert
Botnets dzakabata mamiriyoni enye emakombiyuta uye zvigadzirwa zvemagetsi, uye zvichiri kukura nhamba. Vagadziri vezvokuchengetedza vakabudisa nyevero yakakomba pamusoro pebhotnet idzva rinozivikanwa seReaper. Inofanirwa kuva yerupupuriro ye cyber iyo inokanganisa maitirwo emakambani nemichina yakawanda pasi rese - unlimited bandwidth vps cheap. Chinhu chakaipisisa ndechokuti izvi zvinogona kuiswa pamakombiyuta ako pachako pasina ruzivo rwako. Jack Miller, uyo Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anotaura kuti inogona kupindira kunyange zvakadai semarters, mafoni, uye vamwe uye zvine ngozi.
Chii chinonzi botnet?
Bhotani rine boka guru rekushandisa paIndaneti, zvinotyisa zvinotungamirirwa nekombiyuta. Izvozvi, zvakanaka kwazvo kunze kwekuti inogadzirisa pamwe nhamba yakawanda yemakombiyuta ane utachiona, ma routta, mahwendefa, uye mafoni efoni uye inobata zvigadzirwa zvitsva zvine malware uye mavairasi. Chimwe chezvinhu zvakanyanyisa zvikuru ndezvekuti vashandi havazivi kunyange kuti zvigadzirwa zvavo zvakatapukirwa nemabhodet, sezvo iyi malware inoenderera nekunyarara ichiita zvinhu zvisina kufanira.
> Botnets inoshandiswa kuderedza uye kutarisa mamwe mabasa eInternet, akadai seDDOS (Distributed Denial of Services). pfungwa yekuti mabhakitiriya anobata makombiyuta avo, zviri nyore kuti vaspammers vape data yako pachako.Icho chakaipisisa ndechekuti ma-cybercriminals anoita botnets uye anovatengesa kune avo vanobvumirana vanovashandisa kuita ma cybercrimes pasi rose.
Mwedzi mishomanana yapfuura, botiniti ye Mirai yakakonzera kukanganisa kwakanyanya muUnited States uye yakawanda yehutachiwana yevatori. Yakashandisa zvimwe zvisiri nyore mukuchengetedzwa kwekuchengetedza kwezvigadziri, uye zvakanyanya kukuvadza zvaive zvekugadzirisa.
Chii chinonzi Reaper?
Kugadzirisa kunogona nyore nyore kusvitsa nzira yekuenda kune yakawanda yepakombiyuta uye zvigadzirwa zvemashure uye inopisa dambudziko rinotyisa kupfuura rairi kare. Vanyori vanochengeteka vakaunza dambudziko kuvanhu sezvo vaida kuti vanhu vose vazive nezvebhodeni rakaparadzirwa nemakumbo akawanda munyika yose.
Sangano rakacherechedza kuwedzera kwekuedza kupinda mukati mekuchengetedzwa kweIoT IPS, uye kuwanda kwekutora kwakadaro kwakava pachena munguva ipi zvayo. Masangano anopfuura mamiriyoni maviri akanyunyuta pamusoro pezvigadzirwa zveAIDS neAnited States. Dare rekutsvakurudza rakaratidza kuti inotevera magwenga e-cyber ari kuda kusvika.
Nzira ipi yekudzivisa Kudzoka kubva pakukanganisa kadhi yako?
Kubva zvino zvichienda mberi, zvirwere zvose zvinosanganiswa neRaper zvinongogumira kune routers ne internet-based cameras. Zvisinei, unofanirwa kuisa chirongwa che anti-malware pakombiyuta yako kana kuti foni kuti udzivirire chigadziro chako kubva. MaMacs uye PC zvinowanzoshungurudzika pamhando iyi yemarware, saka unofanira kuedza BitDefender. Ive Android uye vashandisi vheteti vanogona kudzivirira madivayiri avo kuisa software yakakodzera.